इन्स्टाग्राम फन्ट - फन्ट जेनरेटर उत्तम नि: शुल्क र प्रिमियम
"कुन इन्स्टाग्राम फन्ट के मैले प्रयोग गर्नुपर्छ?" हामीले धेरै सुन्ने प्रश्न हो, र यसको जवाफ दिन सजिलो छ! छनोट गर्नका लागि त्यहाँ विभिन्न प्रकारका इन्स्टाग्राम फन्टहरू छन्: यहाँ तपाईंको इन्स्टाग्राम आवश्यकताहरूको लागि 38 उत्कृष्ट इन्स्टाग्राम फन्टहरू छन्। तपाईंले यो सूचीमा दुवै फेला पार्नुहुनेछ। धेरै नि: शुल्क इन्स्टाग्राम फन्ट।
इन्स्टाग्राम फन्ट - फन्टहरू इन्स्टाग्राम के हो?
यो एक इन्स्टाग्राम उपकरण हो जसले तपाईंलाई इन्स्टाग्राम फन्ट परिवर्तन गर्न अनुमति दिन्छ। निम्न इन्स्टाग्राममा सबैभन्दा लोकप्रिय टाइपफेसहरू छन्: सबै क्याप्स, सानो क्याप्स, बबल टेक्स्ट, स्क्वायर टेक्स्ट, बोल्ड, पुरानो अंग्रेजी टेक्स्ट, इटालिक, अपसाइड डाउन टेक्स्ट, स्ट्राइकथ्रु, अदृश्य मसी, र जाल्गो। सबै शैलीहरू कुनै पनि सीमा बिना सामाजिक मिडिया वा सन्देश प्लेटफर्महरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। परिणाम नोटप्याडमा सादा युनिकोड-शैली पाठ हो।
पहिलो फिल्डमा, तपाईंले प्रकाशित गर्न चाहनुभएको पाठ प्रविष्ट गर्नुहोस्। पाठ कन्भर्टरले उडानमा पाठलाई गतिशील रूपमा परिवर्तन गर्दछ। त्यसपछि तपाइँ यसलाई इन्स्टाग्राम, ट्विटर वा फेसबुकमा प्रतिलिपि गरेर टाँस्न सक्नुहुन्छ। यी इन्स्टाग्राम फन्टहरू प्रोफाइल, इन्स्टाग्राम फन्ट र टिप्पणीहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यदि तपाइँ squiggly प्रकारको पाठ चाहनुहुन्छ भने, तपाइँ यसलाई मिलाउन इमोजी वा युनिकोड वर्णहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
इच्छुक व्यक्तिहरूको लागि:
यस जेनेरेटर द्वारा उत्पन्न आइकनहरू वास्तविक इन्स्टाग्राम फन्टहरू होइन तर आइकन सेटहरू हुन्। इन्स्टाग्राको लागि, त्यसकारण, तपाईंले तिनीहरूलाई आफ्नो बायो र टिप्पणीहरूमा प्रतिलिपि गरेर टाँस्न सक्नुहुन्छ। यदि तिनीहरू वास्तविक फन्टहरू थिए भने, तपाईंले तिनीहरूलाई अन्य ठाउँहरूमा प्रतिलिपि गर्न सक्षम हुनुहुने छैन ("फन्ट प्रतिलिपि गर्नुहोस् र टाँस्नुहोस्" को अर्थ छैन - वेबसाइट डिजाइनरहरूले तपाईंले प्रयोग गर्ने फन्ट छनौट गर्नुहोस्, जुन अपरिवर्तनीय छ)।
तर यदि तपाइँ तिनीहरूलाई फन्टहरू (वा इन्स्टा फन्टहरू, वा छोटोको लागि IGG फन्टहरू;) भन्नुहुन्छ भने, कसले ख्याल राख्छ? यो युनिकोड मानकलाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले होइन। यो साँच्चै अचम्मको छ - 100.000+ पाठ प्रतीकहरू, माथि देखाइएको जस्तै अभिशाप अक्षरहरूदेखि लिएर हजारौं विभिन्न वस्तुहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने अजीब इमोजी प्रतीकहरू सम्म।
यदि माथि सूचीबद्ध गरिएका कुनै पनि अद्वितीय वर्णहरू तपाईंको इन्स्टाग्राम बायोमा समर्थित छैनन् (वा प्रश्न चिन्ह वा साधारण वर्गको रूपमा देखा पर्दछ), तपाईंको उपकरणमा आवश्यक युनिकोड वर्णहरू हराइरहेको हुन सक्छ। किनभने युनिकोड प्रोटोकल धेरै व्यापक छ, यसले भविष्यका ग्याजेटहरूमा सबै प्रतीकहरू समावेश गर्न लामो समय लिनेछ, तर प्रगति द्रुत छ त्यसैले तपाईंको ब्राउजर/यन्त्रले तिनीहरूलाई समर्थन गर्न एक वा दुई महिना मात्र लाग्न सक्छ।
म कसरी इन्स्टाग्राम फन्टहरू सिर्जना गर्ने?
चरण १: जाऊ त्यहाँ https://instazoom.mobi/instagram-schrift/
चरण १: उपकरणपट्टीमा, तपाईंले फन्ट सिर्जना गर्न चाहनुभएको पाठ प्रविष्ट गर्नुहोस्
चरण १: तपाईले चाहानु भएको फन्ट प्रतिलिपि गर्नुहोस् र तपाईले चाहानु भएको ठाउँमा टाँस्नुहोस्।
इन्स्टाग्राम फन्टहरूले तपाइँका टिप्पणीहरू वा स्थिति रेखाहरूलाई फरक बनाउँदछ र तपाइँको आफ्नै व्यक्तित्व व्यक्त गर्दछ। सबै स्वतन्त्र रूपमा चयन गर्न योग्य छन्। हामीबाट यस उपयोगिताको बारेमा कुनै प्रश्नहरू, तपाईंले हामीलाई सन्देश छोड्न सक्नुहुन्छ: संपर्क